Trump oo dhigiisa Mexico u digey - BBC News Somali
Trump oo dhigiisa Mexico u digey
Qoraallo la helay ayaa muujinaya in madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, ku booriyey madaxweynaha Mexico in uu joojiyo hadallada uu fagaarayaasha ka yidhaa ee ah in aanu bixinayn kharashka lagu dhisayo gidaarka Trump doonayo in laga dhiso xadka labada dal.
Qoraalladan lagu dhigay nuxurta wadahadal ay labada nin ku yeesheen telefoonka 27-kii Jeeniweri, oo uu helay wargeyska Washington Post ayaa muujinaya in Trump uga digay Enrique Pena Nieto in uu fagaarayaasha ka deedafeeyo gidaarka.
"Warbaahinta sidaa kuma odhan kartid" ayaa la sheegay in uu ku yidhi.
Qoraallo kale oo lagu dhigay nuxurka wadahadalkii ugu horeeyey ee uu Telefoonka kula yeeshay Ra'isal Wasaaraha Australia, Malcolm Turnbull, ayaa iyagana sidoo kale la faafiyey.
Wadahadalkaa teleefanka ee cadhada lahaa ayaa Madaxweyne Trump ugu sheegay dhigiisa Mexico in uu ahaa "wadahadalkii ugu xumaa" ee uu maalintaa yeeshay, hase ahaatee kii uu la yeeshay madaxweynaha Ruushka, Vladimir Putin, wuxuu ku sheegay inuu ahaa mid xiise badan.
Madaxweyne Trump wuxuu ololihiisii doorashada ku galay ballan uu qaaday oo ahayd inuu soohdinta koonfureed ee Maraykanka ka dhisi doono gidaar, waxaanu wacad ku maray in Mexico bixin doonto kharashka mashruucaa ku baxaya.
Hase yeeshee, qoraalladan la helay waxay muujinayaan in madaxweynaha Maraykanku qiray in kharshka lagu maal gelinayo dhisma gidaarkaasi meelo kale laga helo doono, waxaanu yidhi "si uun baanu yeeli doonaa oo farsamo ku keeni" lacagtaa lagu helo.
Waxaanu hadalkiisa ku daray oo yidhi "hadii aad tidhaahdo Mexico ma bixinayso kharashka lagu dhisayo gidaarka, kulan fool ka fool ah idinla yeelan maayo sababta oo ah hadalkaa aad sheegaysaa waa wax aan i marayn".